Ronald Koeman Oo Ka Farxiyey Manchester United Iyo Xiddigii Diiraddu U Saarnayd Ee Ousmane Dembele Oo Uu Qiray Inuu Maanta Ka Degi Karayo Old Trafford - Gool24.Net
Ronald Koeman Oo Ka Farxiyey Manchester United Iyo Xiddigii Diiraddu U Saarnayd Ee Ousmane Dembele Oo Uu Qiray Inuu Maanta Ka Degi Karayo Old Trafford
Manchester United ayaa hadal ka farxiyey waxa uu kasoo yeedhay tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman oo diiday inuu meesha ka saaro in laacibka kooxdiisa ee Ousmane Dembele uu ku biiri karayo Manchester United maanta oo Isniin ah.
Suuqa iibka ciyaartoyda ayaa xidhmaya caawa saqda dhexe, waxaanay kooxaha waaweyn ee ay Manchester United ka mid tahay u shaqaynayaan si waalli ah oo aanay nasasho ku jirin, iyadoo ay waliba Red Devils u raacday guul-darradii sagootiska suuqa ahayd ee Tottenham ugu xambaarisay Old Trafford 6-1.
Khasaarahan ayaa waxa uu soo dedejinayaa in Ed Woodward oo madaxa haystay intii ay ciyaartu socotay isaga oo meel cidlo ah ka fadhiyey Old Trafford uu qasnadda kooxda furo si ay ula soo saxeexdaan laacibiin wax ka beddeli kara musiibada ku dhacday xalay.
Manchester United oo bartilmaameedkeeda koowaad ahaa Jadon Sancho ayaa markii ay ku adkaatay inay Bourssia Dortmund kala soo saxeexato, waxay uga leexatay Ousmane Dembele oo mar kale kulankii ay xalay Barcelona barbarraha la gashay Sevilla ka ahaa beddel aan la isticmaalin.
Ole Gunnar Solskjaer oo sidoo kale rajaynaya in maanta ay kooxdiisu ku si rasmi ah usoo bandhigto laba saxeex oo cusub oo ah Edinson Cavani iyo Alex Telles, ayaa waxa war kale oo ka farxiyey uu kasoo yeedhay tababaraha Barcelona oo sheegay in ay suurtogal tahay in Ousmane Dembele uu maanta ka tago kooxdiisa.
“Maxaa la hubaa adduunkan? Anigu ma garanayo. Waqtigan (Dembele) waa ciyaartoy Barcelona ah, waxaana wali hadhsan hal maalin oo ciyaartoy yimaadda iyo kuwo baxaba u furan, waanaynu arki doonaa.” Ayuu yidhi Ronald Koeman oo wax laga weydiiyey haddii Ousmane Dembele uu tegayo Barcelona.
Dembele ayaa mar kale kaydka ku jiray iyadoo aan lasoo gelinin, waxaanay taasi bixiyey ishaaro muujinaysa inuu tegayo.
Tababare Koeman oo mar kale sharraxay go’aanka fadhiisinta Ousmane Dembele ayaa yidhi: “Waxa aan doortay Francisco Trincao, Pedri iyo Miralem Pjanic oo iyaguba fadhiyey. Waxa aanu u baahnayn in aanu in badan ciyaarta maamulno, sababtaas ayaanan beddelladan u sameeyey.”
Manchester United ayaa ku doonaysa Ousmane Dembele inay amaah kaga qaadato Barcelona si uu inta ka dhiman xili ciyaareedkan uga caawiyo inay horyaalka horumar ka sameeyaan.